ICamster enye - ingxoxo yabantu abadala njenge-flirtymania.plus
Ingxoxo ye-webcam yabantu abadala yabantu abadala iCamster noma i-Flirtymania.plus
Khetha imodeli yakho ye-webcam
Ubulili befoni sebuphelile, ingxoxo yabantu abadala ye-webcam ikusasa! Ingxoxo yethu evusa inkanuko engaphezulu kwengxoxo esondelene nje.
ICamster ayabelani ngemininingwane eminingi ngamamodeli wabo we-webcam. Lokhu kusho ukuthi amantombazane oxoxa nawo kusayithi lawo avame ukufiphala abe munye. Zijwayele ukungabi nokwehlukahluka, ngakho-ke uzothola amamodeli amaningi abukeka efanayo.
Nge-Flirtymania.plus, uqinisekile ukuthola abesifazane abavela kuwo wonke umhlaba, abeza ngazo zonke izinhlobo nobukhulu. Futhi ngenxa yohlelo lwethu oluphezulu lwekhathalogi, lowo muntu okhethekile kuzoba lula ukumthola. Sinezici 'ezinetimu' ukuze ukwazi ukuthola ngqo lokho okufunayo.
Ikhathalogu ye-Camsters lackluster nayo yenza kube nzima kuwe ukuthola uhlobo lwamantombazane niche olubi olifunayo. Uma unamakhinki athile, futhi ufuna ukuxoxa nemodeli ongakunikeza lokho, uzoba nesikhathi esinzima ukukuthola kuCamster. Kepha kuFlirtymania.Plus amamodeli wethu amahle azokwenza okudingekayo ukwanelisa zonke izifiso zakho.
Yiba yisibonelo se-Webcam
NjengoCamster sikunikeza amathuba amaningi okuzibonakalisa
Yenza ukusakaza bukhoma
UCamster ugcizelela kakhulu ubunqunu nobulili obuqhakazile obunikezwe nguwe njengesibonelo. Ngenkathi wamukelekile ukuthi ungcole ngendlela othanda ngayo uma uyikhamera yeFlirtymania.plus, akudingeki ukuthi ube nqunu uma ungafuni. Kulungile!
Thola imali ngamadonathi
ICamster iphinde inikeze ngezinketho ezinqunyelwe zokuhoxiswa kwezinhlobo zamazwe omhlaba. Izinhlobo ezingezona zase-US zingafinyelela kuphela kumholo wazo ngezinhlobo ezintathu zebhange: iDwolla, Payoneer ne-CMB. NgeFlirtymania.plus amamodeli wethu angafinyelela kuzo zonke izinhlobo zethu zokukhokha ezitholakalayo kungakhathalekile ukuthi bahlala ezweni lani. Lokhu kufaka phakathi i-ISA, Mastercard, Bitcoin, SEPA, neBitsafe.
Thola imali kubanikeli
Nge-Flirtymania.plus nawe unenketho yokuxoxa namadoda avela kuwo wonke umhlaba. Uma ungakhulumi isiNgisi, noma olunye ulimi lwamazwe omhlaba, ungakhathazeki. Izinsizakalo zethu zokuhumusha ezakhelwe ngaphakathi zisho ukuthi ungathumela futhi wamukele imilayezo ezohumusheka ngokuzenzakalela kulimi oluthandwa ababukeli. Lokhu kukhulisa impela inani lababukeli ozoba nalo ezinhlelweni zakho ze-webcam.
Beka izithombe zakho
Kunamantombazane amaningi asebenza kusayithi lethu angaqhubi imibukiso yezocansi, futhi kwesinye isikhathi angalokothi asuse into eyodwa yokugqoka. Inqobo nje uma uxhumana nekhasimende, futhi uligcina lijabule, leyo akuyona inkinga kithi.
Yiba umxoxi wezindaba ovusa inkanuko
ICamster ayikuniki ikhono lokubeka izindaba zakho ngocansi - kepha thina siyakwenza!
Kunesinye isici esiyingqayizivele seFlirtyMania.plus esinikela ngeCamster njengamanje. Leso yisici sethu sokuxoxa izindaba ezingcolile. Uyakwazi ukwakha izindaba zakho ezivusa inkanuko zesayithi lethu, bese usebenzisa i-Flirtymania.plus njengengxenyekazi yemicabango yakho yabantu abadala.
Ambalwa amanye amasayithi akunikeza amandla okwenza imali ngenkathi ungagcini izingubo zakho kuphela, kepha angaveli nakukhamera.
IFlirtymania.plus ikukhokhela u- $ 0.04 ngokubukwa ngakunye kwendaba yakho. Kuyindlela eyengeziwe yokukhuthaza amakhono akho, futhi uwahlanganyele nomhlaba. Hhayi lokho kuphela, kepha njalo lapho umbukeli ethola isiza sethu futhi engena ngemvume ngebhulogi yakho noma izindaba, uzothola ama-30% walokho abakukhokhelayo ukuze bajoyine.
Vakashela i-Flirtymania.plus esikhundleni seCamster futhi ube yinkanyezi ye-webcam!